Iyo vhezheni yeFirefox yeFedora yatove nerutsigiro rwekumhanyisa kumisikidza vhidhiyo kuburikidza neVA-API | Kubva kuLinux
Iyo Firefox package inochengeta Fedora yakazivisa izvozvo tsigiro ikozvino yakagadzirira kushandisa Hardware kumhanyisa yevhidhiyo kududzira Firefox muFedora uchishandisa iyo VA-API, kubvira kumhanyisa kusvika parizvino kwaingoshanda munzvimbo dzakanangana neWayland, sezvo iyo Chromium VA-API rutsigiro yakaitwa muFedora gore rapfuura.
Izvi zvakawedzera rutsigiro rwekumhanyisa Hardware kwevhidhiyo kududzira muFirefox yakagoneswa neiyo itsva Wayland backend, iyo inoshandisa iyo DMABUF michina yekudhirowa magadzirirwo uye kuronga kuchinjaniswa kweye buffers neaya maficha nemaitiro akasiyana.
Ehe, iri pakupedzisira pano. Gore nehafu mushure meTom Callaway Injiniya Manager @ Red Hat akawedzera chigamba kuChromium, isu tinowanawo Hardware yakamhanyisa kutamba kwevhidhiyo yeFirefox. Zvinonyadzisa kuti zvakatora nguva refu asi ndichiri kudzidza.
VA-API tsigiro muFirefox yakanangana, sezvo ichishanda muWayland chete panguva ino. Iko hakuna chikonzero chehunyanzvi cheizvozvo, ini handina nguva yakakwana yekuishandisa iyo X11, saka kukanganisa 1619523 kwakamirira vabati vane hushingi.
Jonas Ådahl (Red Hat) akandibatsira neWayland backend kubvira yekutanga Wayland chigamba makore mana apfuura.
MuFedora 32 uye Fedora 31, iyo nyowani vhezheni yeFirefox 77 inosanganisira iyo nyowani yekumashure nekumisikidza painomhanya muGNOME dhatabhesi dhatabhesi paWayland, asi kugonesa Hardware yakamhanyisa vhidhiyo kudhiza mamwe mapakeji anodawo anodikanwa. iyo inofanirwa kuiswa pane ino sisitimu: ffmpeg, libva uye libva-zvishandiso RPM Fusion repository, rakanyorwa pamwe VA-API rutsigiro.
Pane masisitimu ane Intel mifananidzo makadhi, kumhanyisa inoshanda chete ne libva-intel-driver driver (iyo libva-intel-hybrid-driver haina kutsigirwa parizvino).
For the AMD GPU, kumhanyisa kunoshanda kana iwe uine raibhurari yakajairwa radeonsi_drv_video.so, inova chikamu cheMesa-dri-driver package. Kwemakadhi emifananidzo eNVIDIA, rutsigiro harusati rwaitwa. Kuti uongorore kuenderana nemutyairi VA-API, unogona kushandisa zvisina basa utility.
Kana rutsigiro rukasimbiswa, kugonesa kumhanyisa muFirefox, pane iyo "nezve: gadzira" peji, unofanirwa kuseta zvinoshanduka "gfx.webrender.enabled" uye "widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled" kuchokwadi.
Mushure mekutangazve bhurawuza, iwe unofanirwa kutarisa kumisikidza kweWebRender uye iyo nyowani backend (Wayland / drm) pane peji nezve: rutsigiro.
Mushure meizvozvo, mushandisi anofanira kuve nechokwadi chekuti VA-API inoshandiswa kumhanyisa kuratidzwa kwevhidhiyo (panogona kunge paine nyaya dzekuenderana nemacodecs, saizi yevhidhiyo, uye maraibhurari), iyo modhi yekugadzirisa nzira inogona kugoneswa nekutanga Firefox ine MOZ_LOG nharaunda inoshanduka uye kutarisa kuvapo kwe «VA-API FFmpeg init kubudirira.
Iko kushandiswa kwekumhanyisa kana uchiona YouTube kunoenderana nenzira iyo bhaisikopo rakanyorwa (H.264, AV1, nezvimwewo).
Iwe unogona kuona fomati iri-kurudyi-tinya mamiriro ezvinhu mune iyo "Statistics yeNerds" chikamu. Kuti usarudze fomati inotsigirwa neiyo hardware vhidhiyo yekumisikidza system, unogona kushandisa yakawedzera h264ify plugin.
Sega, mapakeji neFirefox 77.0 yeFedora anosanganisira mamwe mapepa izvo zvinokanganisa mashandiro uye kugadzikana, izvo zvisipo muMozilla yakajairwa Firefox 77.0 inovaka. Kuiswa kwezvimedu izvi muchimiro chikuru kunotarisirwa chete muFirefox 78.0 (vashandisi vanogona kushandisa beta vhezheni yeFirefox 78 kana inovaka husiku kubva kuMozilla nekutangisa bhurawuza nemurairo "MOZ_ENABLE_WAYLAND = 1 ./firefox").
Zvakare, Mozilla inovaka Ivo vanoshandisa yakavakirwa-mukati libvpx raibhurari iyo isingatsigire VA-API yeVP8 / VP9 kududzira; kana kumhanyisa kuri madikanwa yeVP8 / VP9 kududzira, libvpx inofanirwa kuve yakaremara nekumisikidza iyo inoshanduka "media.ffvpx.enabled" mu "pamusoro" nezve: gadzira "manyepo"(libvpx yatove yakaremara mupakeji kubva kuFedora repository).
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza iyo yekutanga noti pane iyo yepamutemo webhusaiti ye Martin Stransky.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Iyo Firefox vhezheni yeFedora yatove nerutsigiro rwekumhanyisa vhidhiyo kudhizaini kuburikidza neVA-API